Quarkus: Nyowani yeNative Java Sisitimu yeKubernetes | Linux Vakapindwa muropa
Isu tese tinoziva chirongwa ichi Kubernetes, uye tinoziva zvakare kuti iyo Java programming mutauro Yakave nesu kwemakore mazhinji uye ndeimwe yeanonyanya kushandiswa nhasi, uye saka ndiyo inokwezva vanogadzira zvakanyanya uye nharaunda dzakakura kwazvo dzebudiriro. Muchokwadi, kana iwe ukatevera iyo TIOBE rondedzero yemitauro yekushandisa yakanyanya kushandiswa mukomputa pasirese, Java haina kunge iri pazasi pechinzvimbo chechipiri mune chinzvimbo ichi, icho chinopa pfungwa yeakanyanya mukurumbira.
Java yakazvarwa muma 90s, Kubva paruoko rwechisina basa Sun Microsystems (ikozvino Oracle), uye ine makore angangoita makumi maviri ekuvandudza uye optimization yekumhanyisa ine simba ine simba monolithic kunyorera iyo inotora yega muridzi weyekuyeuka uye CPU (yakagadzirirwa) nekuda kweiyo chaiyo muchina Java iyo ine iyi chikuva. semuturikiri wemutauro wakataurwa. Uye wadii kutora izvi kune iro gore, IoT, nharembozha, Kubernetes, makontena, microservices, kuita zvekare chirongwa, uye kushanda sevhisi kana FaaS? Sezvo isu tichigara munyika inotongwa nezvikamu izvi. Aya gumi nemaviri madhiraivha akakosha uye gore rekuzvarwa kunyorera kunyorera kunogona kununura akakwira mwero ekugadzirwa uye kugona. Zvakanaka ndipo panosangana Java zvino Kubernetes uye vanosangana hwaro hutsva.
Zita rehurongwa hwataurwa ndi Quarkus, inosvika pamwe chete ne Supersonic Subatomic Java. Quarkus ihwaro Java yechizvarwa cheKubernetes yakagadzirirwa GraalVM uye HotSpot, yakagadzirwa kubva kumaraibhurari akanakisa eJava uye zviyero pamusika. Chinangwa chaQuarkus kugadzira Java chinzvimbo chinotungamira cheKubernetes nenzvimbo dzisina server, uku uchipa vanogadzira modhi yekubatanidza uye yakakosha modhi yekugadzirisa zvakakwana huwandu hwakawanda hwekuparadzirwa kwekushandisa.
Pindai hunhu inopihwa naQuarkus (chikuva-chakaedzwa kuyedzwa neRed Hat):
Kurumidza kutanga, mumakumi mashoma emamirisikosi, ayo anogonesa kuyera otomatiki kwema microservices mumidziyo neKubernetes, pamwe nekukasira kuuraya kweFaaS.
La kushoma kwendangariro kushandiswa inobatsira kukwidziridza huwandu hwemidziyo mune microservices kuvaka deployments iyo inoda yakawanda midziyo.
Diki rekushandisa saizi yemudziyo.
Ipa muenzaniso inoshanda uye inoda yakabatana yevagadziri veJava kuti vanzwe kujairana.
Vagadziri vanonakidzwa kumisidzana kwakabatana mune imwechete yezvivakwa faira, zero kumisikidzwa, rarama kurodha zvakare mukubwaira kweziso, yakareruka kodhi ye80% yezviwanzo zvinoshandiswa uye inoshanduka kwe20%, pasina kuburitsa zvinogumbura zvechivanhu zvinoitika.
Iwe unenge uine iyo maraibhurari ari nani uye zviyero.
Mhinduro dzinoshanda kumhanya Java pane microservices, isina server, gore, midziyo, Kubernetes, FaaS, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Quarkus: Nyowani yeNative Java Sisitimu yeKubernetes
Zvinorevei "zvinogumbura zvechivanhu zvinokwanisika"?